သံသယရှိသောအချက်အားဖြေကြားခြင်း ဘာကြောင့် ဆောနော 11 ဆေးလက်မှတ်ထောက်ခံစာယူရပါသလဲ - Intouchmedicare
Last updated: 2022-01-17 | 1623 ကြည့်ရှုခြင်း |
ဆေးလက်မှတ်ထောက်ခံစာ သည်ကျွန်ုတို့နှင့်ရင်းနှီး၍ ကျောင်းသားဘ၀ကတည်းကကြားဖူးနား၀ရှိသသောစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဖျားနာမှု့အား အတည်ပြုရန်ကျောင်းသို့လာ၍တောင်းဆိုရမည်ဖြစ်ပြီးကျောင်းမှခွင့်ယူရန် ခွင့်ပြုချက်တောင်ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။သို့ပေမဲ့ ဆေးလက်မှတ်ထောက်ခံစာ၏အသေးစိတ်များနှင့်အခြားအသုံးပြုသောနည်းလမ်းအများအပြားရှိပါသည်။အလုပ်၊ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ် များတွင် ကျွန်ုပ်တို့နားလည်ထားရမည့်အချက်များစွာရှိပါသည်။ဤဆောင်းပါးတွင်လက်ရှိအသုံးပြုနေသောဆေးလက်မှတ် ဆောနော 11 အကြောင်းအားဆွေးနွေးခြင်းနှင့် Intouch Medicare ဆေးခန်းတွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်ရရှိရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအပါအ၀င် ဤစာရွက်စာတမ်းအကြောင်းအားပိုမိုသိရှိရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
ဆေးလက်မှတ်ထောက်ခံစာ ဆိုသည်မှာ အမှန်တစ်ကယ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု့ခံယူသူတိုင်း၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုအစီရင်ခံသည့်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ဆေးကောင်စီ၏ ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်အား မှတ်ပုံတင်ထားသောသမားတော်မှထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။စစ်ဆေးမှု့ပြီးပါက ဆရာ၀န်မှ စာရွက်စာတမ်းပုံစံ ဆောနော 11 အားရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းအသုံးပြုရန်အတွက်ကျန်းမာရေးလာစစ်ဆေးသူအားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆောနော 11 ဆေးလက်မှတ်အတွက် ဘာတွေစစ်ရမည်နည်း
ဆောနော 11 ဆေးလက်မှတ်တွင် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးသောဆရာ၀န်နှင့်ပက်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်၊ရာထူး၊ဆေးရုံ၊၀န်ဆောင်မှု့အားရယူသည့်သူ၏အသေးစိတ်အချက်အလက် ရောဂါ9မျိုး၏စစ်ဆေးမှု့ရလဒ်များနှင့်အခြားရောဂါများ အကြောင်းအသေးစိတ်ပါရှိမည်ရောဂါများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်
1. တီဘီရောဂါ / Tuberculosis
2. ကာလဝမ်းရောဂါ / cholera
3. အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါ / Typhoid fever
4. ၀မ်းကိုက်ရောဂါ / Dysentery
5. ရေကျောက်ရောဂါ / Chickenpox
6. ပါးချိတ်ရောင်ရောဂါ / Mumps
7. လက်ပရိုစီအနာကြီးရောဂါ / Leprosy
8. အရေးပြားရောင်ရမ်းခြင်း / Dermatitis
9. အသည်းရောင်ရောဂါ / Hepatitis
10.အခြားသောရောဂါများ / Other
အဆုံး၌ ဆေးလက်မှတ် ဆောနော 11 စာရွက်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဆရာ၀န်၏ထင်မြင်ယူဆချက်နှင့်အပြံပြုချက်များအားအကျဥ်းချုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။
ဘာကြောင့်ဆေးလက်မှတ် ဆောနော 11 စာရွက်အားတောင်းရပါသလဲ
ဆေးလက်မှတ် ဆောနော 11 စာရွက်အားတောင်းခံရာတွင် ရောဂါများမရှိကြောင်းစစ်ဆေးသူ၏ကျန်းမာရေးအား ဆောနော 11 တွင်သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ရောဂါများမရှိကြောင်း အသိအမှတ်ပြုသည့်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပြီး ကိစ္စရပ် များစွာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်များမှာ
အလုပ်မစတင်မီအလုပ်လျှောက်ထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီ၏မူဝါဒများ အတိုင်း(သို့)ဥပဒေအရလိုအပ်သည့်အတိုင်းတင်ပြရာတွင်အသုံးပြုသည်။
အချို့သောအလုပ်အကိုင် ဥပမာအစားအသောက်ကိုင်တွယ်သူ(သို့)၀န်ဆောင်မှု့အလုပ်များသည် မိမိ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်(သို့)ဖောက်သည်အား ကူးစက်နိုင်သည့်ရောဂါများမရှိကြောင်းအတည်ပြုရန် အဖွဲ့ အအစည်းအားဆေးဘက်ဆိုင်ရာလက်မှတ်တင်ပြရာတွင်အသုံးပြုပါသည်။
Intouch Medicare ဆေးခန်းမှဆေးလက်မှတ်လုပ်ပုံနည်းအဆင့်ဆင့်
ဆေးခန်းကောင်တာရှိ ၀န်ထမ်းများသို့မည်သည့်အခြေအနေမျိုးအတွက်ဆေးလက်မှတ်ရယူလိုကြောင်းအားအကြောင်းကြားပါ ၀န်ထမ်းမှသင့် အားသွေးပေါင်ချိန်တိုင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်တိုင်းတာခြင်းများအား ဆေးခန်၀န်ဆောင်မှု့ပေးသောနေရာတွင်ချိန်ညှိပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွမ်းကျင်သောဆရာ၀န်နှင့်မတွေ့မီ ၀န်ထမ်းများမှသင်၏မှတ်တမ်းပဏာမအား ထုတ်ယူပါမည်။
သင်၏တောင်းဆိုချက်အရ ဆေးလက်မှတ်တွင်ဖော်ထုတ်ပေးရန်အတွက်ဆရာ၀န်နှင့်တွေ့ သောအခါ ကိုယ်ခန္ဓာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု့အားဆရာ၀န်မှပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။
နောက်ပိုစင်းတွင် သင်ဆေးလက်မှတ်ရပြီးနောက် ၀န်ထမ်းမှသင့်အား သင့်အမည်၊မျိုးရိုးအမည်နှင့် ဆေးလက်မှတ်ပေါ်ရှိ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို တိကျမှု့ရှိစေရန် စစ်ဆေးခိုင်းမည်ဖြစ် ပါသည်။
ဆေးလက်မှတ်သည်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် အရေးကြီးသည်ကြီးသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။အလုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အပိုင်းနှင့် ဥပဒေအရလိုအပ်သည့်အပိုင်း နှစ်ခုလုံးအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသော၀န်ဆောင်မှု့နှင့်ဆရာ၀န်အားရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။အလုပ်မစခင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးချင်သူများအတွက်ဆေးစစ်ချက်လက်မှတ်တောင်းခံရန် ၀န်ဆောင်မှု့အား Intouch Medicare ဆေးခန်းမည်သည့်ဌာနခွဲတိုင်းတွင်မဆို စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင်၏စစ်ဆေးမှု့အဖြေအားလျင်မြန်တိကျ၍ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသောခေတ်မီစက်ကိရိယာများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိ၍ကျွမ်းကျင်သော ဆရာ၀န်နှင့်သူနာပြုအသင်းအဖွဲ့ရှိပါသည်။
ใบรับรองแพทย์ สณ11 ใบรับรองแพทย์สณ11 ဆေးထောက်ခံစာလက်မှတ် ဆောနော 11 ဆောနော 11 ဆေးလက်မှတ်ထောက်ခံစာ ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน